Ungatanga sei muLinux: zviwanikwa zvekutora nhanho | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga paLinux: zviwanikwa zvekutora
Isaac | | GNU/Linux, Windows
Mune zvimwe zvinyorwa zveLxA isu takatokubatsira neakawanda ezvidzidzo uye nhau dzaunofanirwa kuziva paLinux. Ini ndakatozvitsaurira akati wandei zvinyorwa kubatsira vashandisi vaiuya kubva kune mamwe masisitimu anoshanda uye vanga vamhara kekutanga pane GNU / Linux kugovera kana vanga vachironga kuzviita.
Iyo network yakanetswawo nezvikonzero nei shandisa GNU / Linux pachinzvimbo cheWindows, kana mamwe masisitimu, asi zvisinei nazvo, uye chero chikonzero chechisarudzo chako, iwe unofanirwa kuziva nhevedzano yezviwanikwa zvinogona kukubatsira iwe kutora matanho ako ekutanga muLinux uye usakundikana mukuyedza kwako.
2 Zvimwe zviwanikwa zvekukubatsira iwe
Recuerda, que muvengi mukuru iyo yauri kuenda kunowana inonzi «tsika». Kana iwe wajaira kune mamwe masisitimu anoshanda, kunyangwe iyo nyowani yauri kuyedza kutamira kune iri chiuru iri nani, unozopedzisira waedzwa kuti udzokere kunzvimbo yako yekunyaradza, kunyaradza, kune izvo zvaunoziva kare. Icho chinhu chinoitika kune vazhinji vashandisi vanotanga, asi iko kuramba kwaunofanira kukunda uye mune imwe nguva unenge uchishandiswa zvachose uye uchishandurwa. Panguva iyoyo, iwe hauchade chero chimwe chinhu ...
Esa "tsika" inogona kuuya kwauri nenzira dzakawanda. Vamwe vanoriidza vatyairi, vamwe vanoridaidza kuti Hofisi, vamwe vanoritumidza kuti yavo yavanofarira app, kana zvimwe graphical nharaunda. Mune mamwe mazwi, zvikonzero zvekusapfuurira neLinux zvinogona kuve zvakasiyana kwazvo. Asi iwe unofanirwa kutsvaga mhinduro kwavari kuti vagare. Uye izvo zvinoitika nekutsvaga dzimwe nzira dziripo uye kujaira kwazviri:
Iwe unofanirwa kuziva izvo nezve rutsigiro rwe HardwareLinux handizvo zvayaimbove. Yakavandudza zvakanyanya uye iwe uchawana madhiraivha eanenge zvese zvinhu (zvese zvemahara uye zvine kodzero).
La hofisi otomatiki iri zvakare chimwe chezvipingaidzo zvinonyanya kutaurwa. Kuvimbika paMS Office kune hutsinye, asi kune dzimwe nzira huru senge LibreOffice. Uye kana izvo zvikasakugutsa, unogona kushandisa Hofisi webhu, uye kutoshandisa virtualization, Waini, ...
Chipingamupinyi chako chingave chimwe Software iyo yaunoshandisa kazhinji. Chekutanga pane zvese, ita shuwa kuti haisipo yeLinux natively. Semuenzaniso, mabhurawuza eFirefox neChannel ndeeLinux, uye senge iwo, zvimwe zvirongwa zvakawanda (VLC, Steam, ...). Kana zvisiri, pane zvakawanda zvingasarudzwa. Dzimwe nguva chinhu chakaoma kusazviwana, asi kusarudza kuti ndeipi yekushandisa, nekuti pane akati wandei. Semuenzaniso, kana iwe ukavimba nezvimwe zvirongwa zvakaita sePhotohop, Premier, Cinema 4D,… iwe unowana zvinonakidza zvibodzwa seGIMP, OpenShot, uye Blender.
Desks Ivo zvakare ndeimwe yeayo "tsika" kana zvikonzero. Kunyangwe iwe uchibva kuMacOS kana Windows, une mamiriro edesktop kana zvinwiwa zvemastros kuti ugone kuve nemamiriro ezvinhu edesktop akafanana zvakafanana sezvinobvira. Iwe unongofanirwa kutsvaga iyo yakakodzera kwazvo.
ari gamers Ivo zvakare ndevamwe vanonyanya kusada kuchinja, uye chikonzero ndechekuti hapana akawanda mazita anowanikwa eGNU / Linux. Native vhidhiyo mitambo yeLinux yakakura zvakanyanya mumakore achangopfuura, uye kune mamwe mapuratifomu ekushambadzira ari kudzima zvipingamupinyi mune izvi. Iwe zvakare une Steam ine Proton, kutamba mitambo yako yaunofarira yemuno yeWindows paLinux, uye nesimba ...
Ndeipi yako "asi", kana "yako tsika"? Funga, zvirokwazvo pane imwe nzira ...
Zvimwe zviwanikwa zvekukubatsira iwe
Nezvo zvataurwa, ikozvino ndichakuratidza zvimwe zviwanikwa yazvo iwe yaunofanirwa kufambisa zvishoma nzira. Semuyenzaniso:
Maitiro ekufambisa kubva kuMacOS kuenda kuLinux
Maitiro ekufambisa kubva kuWindow kuenda kuLinux
Windows chirongwa chinotsiva
Ini ndoda native Windows software, ndoitei?
Ini ndoda kutamba Windows mazita, ndinogona here?
Ini handidi dzimwe nzira dzeMicrosoft Office, ini ndoda MS Office hongu kana hongu
Ndinoda Windows desktop
Ini ndinoda macOS desktop
Zvakare, kana iwe uine kusahadzika nezve kutora nhanho yekutanga uye kutora Linux, iwe zvakare unayo mawebhusaiti seizvi kwavanazvo ruzivo uye FAQs izvo zvinogona kubvisa kusava nechokwadi kwese kwauchiri nako.
Iwe hausisina chero chikonzero chekusvetuka! Uye rangarira, unofanira kukurira kupokana kwekutangaSezvo mwedzi unoenda nekungoshandisa GNU / Linux, iwe unozoona kuti haina kutyisa sezvawaifunga, uye uchajaira. Kana nguva iyoyo yasvika iwe uchazoona nekuti ichave nguva iyo iwe paunoisa "mabhuts" kuti ubve pachikuva ichi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kutanga paLinux: zviwanikwa zvekutora
LibreOffice 7.0.4 inoenderera nekugadzirisa mabugs nekuvandudza kuenderana neMicrosoft Office